Isitala sama-Victori - umbandela webusika 2016-17
Ama-Victorian motifs aphezulu uluhlu lwentlalo yokugqibela yonyaka wobanda. Ubuhle babo obuhle bukhuthaza abaqulunqi ukuba benze iingubo ezigulisa iingqondo kungekuphela kweziganeko ezizodwa, kodwa kunye nemifanekiso yemihla ngemihla.
I-Monochrome Classics: I-Veronique Branquinho Ibhulabhu yasekwindla
Iimpawu zothando kuma-note: izinto ezivela kwi-velvet kunye ne-velor-imeko ebaluleke kakhulu kwi-wardrobe ye-fashionable-2017. I-Sarafans kunye neengubo ezivela kule miqulu ye-regal ziyakwenza ngokumangalisayo: zinokudibaniswa neengxuma eziluhlaza, iigalofu zegalofu kunye ne-chiffon blouses. Nangona kunjalo, i-velvet iyanelisekile ngokupheleleyo - ukuthungwa kwayo kwe-silky kuvumela ukudala imifuno emangalisayo kwiingubo ze-laconic.
Ulungelelaniso olusisiseko oluvela kuRoland Mouret, uNicole Miller no-Etro
Amaqhawe aseDickens kunye noThackeray ekuchazeni namhlanje: ukuqokelela iVerqueque Branquinho FW 2016-2017
Amaqabunga azayo akusiyo isizathu sokuyeka i-lace. Izisiphelo ezingenasiphako kunye neengubo eziqhathaniswa nezicatshulwa ezinqamlekileyo - isiseko esihle kakhulu sokudibanisa ezininzi. Ngexesha langoku, kufuneka baxhaswe ngamaccaches kunye nezikhwebu ezinqamlekileyo, iingubo ezivuthayo, amabala omlilo kunye nezibhobho eziphezulu- "iipayipi".
Izambatho zeLacy e-Alberta Ferretti kunye noSimone Rocha ubonisa
Kwaye, ke, iimpapasho zeentyatyambo. Ngalesi sihlandlo badlala indima yekhonkco phakathi kwazo zonke iintando "zothando". Iipateni ze-Floristic zitshintsha ngobuchule kwi-velvet, zihlobise iingubo zamabhinqa, iingubo kunye neengubo, ngokuthelekisana ne-foam eninzi ye-frills kunye ne-lace. Kuchaneka njani ukugqoka ubu bukhulu? Izibalo zincoma umthetho olula: i-minimalist, izixhobo ezinkulu kunye nezihlangu.
I-extravaganza embala kwiqoqo lasebusika i-Erdem
Indlela ye-Vinyl - ebusika: indlela yokugqoka kakuhle
Kuvuyiswa gqitha ukudibana nomntu ohlala naye?
Isobho se-chicken giblets kunye ne foie gras
Udliwano-ndlebe no-Alexander Pedan owaziwayo
Iziqhamo kunye nemifuno efanelekileyo ekunciphiseni ushukela wegazi
Ukutya okumnandi imihla ngemihla